राती १० बजेको सेरोफेरो चैत ९
मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रि बिजयकुमार गच्छदारले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालना नगर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले आचारसंहिता अव्यवहारीक भएको भन्दै उल्लंघन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
बिराटनगरमा अगुवा कार्यकर्ताहरुको भेलामा बोल्दै मन्त्रि गच्छदारले चुनाव प्रचारका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा जान नहुने भनी तयार गरेको आचारसंहिता अव्यवहारीक भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले आचारसंहिता पालना गर्ने हो भने बिराटनगर वा सुनसरी जिल्ला घर भएका मन्त्रिहरु बिराटनगर विमानस्थल नै जान नसक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रि रेणुकुमारी यादव लगायतका नेताहरुले आचारसंहिताको विरोध गर्दै कुनै पर्वाहा नगर्ने बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आदीवासी जनजाती र अन्य समुदायबीचको विभेद अन्त्य गर्ने अभियानमा आफुहरु जुटिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिराटनगरमा अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिदै अध्यक्ष यादवले हरेक प्रकारका विभेदका विरुद्धमा आन्दोलित हुन र अधिकार प्राप्तिको लर्डाईमा सरिक हुन आग्रह गर्नुभयो ।
आगामी चैत्र २८ गते हुने संविधान सभाको उप निर्वाचनको प्रचारका लागि बिराटनगर आउनु भएका अध्यक्ष यादवले मधेशी जनताले सामाजिक प्रजातन्त्रवादी शक्तिको रुपमा स्थापीत भएको पार्टर्ीीई विजयी गराएमात्र हरेक प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न सकिने दावी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पार्टर्ीी सहअध्यक्ष जयप्रकास प्रसाद गुप्ताले उप निर्वाचनको परिणामले मधेश आन्दोलनको रक्षा गर्ने वा क्षती व्यहोर्ने भन्ने निर्ण्र्ाागर्ने बताउनुभयो । फोरमले निर्वाचन प्रचारका लागि आफ्ना चारै जना मन्त्रिलाई बिराटनगरमा केन्द्रीत गरेको छ ।
जारी बन्द हड्ताल खुलाउन बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति झापाको बैठकले दमकमा भोलि हुने पल्लो किरात लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चको कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्ण्र्ाागरेको छ ।
मञ्चले अरुण पर्ूवका नौ वटा जिल्लालाई छुट्टै राज्य घोषणा गर्न माग गर्दै कार्यक्रम गर्न लागेकाले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्ण्र्ााभएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालले बताउनुभयो ।
बैठकले भोलिदेखि झापामा प्रहरी स्कर्टिङमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्ण्र्ाापनि गरेको छ । स्कर्टिङका बेला अवरोध गर्नेलाई कडा कार्वाही गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिइएको पनि प्रजिअ दाहालले बताउनुभयो ।
यसैविच पाँच दिनदेखिको बन्द र लिम्बूवान ज्यादतिको विरोध गर्दै नागरिक समाजले झापाका विभिन्न स्थानमा आज पर््रदर्शन गरेका छन् ।
लिम्बूवान कार्यकर्ताले निर्दोष नागरिकमाथि ज्यादति गरेको भन्दै नागरिक समाज चारपानेको अगुवाईमा आज दिउँसो विर्तामोडमा निस्किएको विरोध जुलुसमा हजारौं र्सवसाधारणको सहभागिता थियो ।
जिल्लास्थित राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, पेशाकर्मीको र्समर्थन रहेको विरोध जुलुशले विर्तामोड नगर परिक्रमा गरी सभामा परिणत भएको थियो ।
चारपानेको जुलुशलाई शनिश्चरे, अर्जुनधारा, सुरुङ्गा र अनारमनीका बासिन्दाले र्समर्थन जनाउँदै पर््रदर्शन गरेका थिए । यसअघि दैनिकजसो लिम्बूवान कार्यकर्ता र चारपानेबासी बीच झडप हुँदै आएको छ ।
यसैबीच, आन्दोलनरत संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद र नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
साझ महासंघको कार्यालयमा भएको वार्तामा सो सहमति भएको हो । सहमतिपछि लिम्बूवानका औपचारिक समाचार वहिष्कार गर्ने पत्रकारको निर्ण्र्ााफिर्ता भएको पत्रकार महासंघ झापाका सहसचिव राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो । वार्तामा प्रेसमाथि आक्रमण नगर्ने, आगजनीबाट क्षत्रि्रस्त पत्रकारका सवारीसाधनको क्षतिपर्ूर्ति १० दिनभित्र दिने र प्रशासनसँग वार्ताको वातावरण मिलाएर बन्द फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
यसअघि महासंघका कोषाध्यक्ष कृष्ण मिश्रमाथि लिम्बूवान कार्यकर्ताले आक्रमण गरी उहा सवार मोटरसाइकलमा आगजनी गरिएपछि झापाली पत्रकारले लिम्बूवानका समाचार वहिष्कार गर्दै आएका थिए ।
यता उद्योग बाणिज्य संघ इटहरीले बन्दले जनजिवनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै तत्काल बन्द फिर्ता लिन सम्बन्धित पक्षसंग आग्रह गरेको छ । संघले बिज्ञप्ती निकाली बन्दले र्सवसाधारणलाइ असर पारेको भन्दै भोली देखी बनद फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । यस्तै प्याब्सन सुनसरीले पनि विज्ञप्ती निकाली बन्द हडताल तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । लगातारको बन्द र हडतालले बिद्यालयमा हुनेे बाषिर्क परिक्षा समेत प्रभावित भएको भन्दै बन्द हडताल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
लिम्बुवान सम्बद्ध बिभीन्न समुहहरुले तिन दिन देखी गरेको अनिश्चितकालिन बन्दले पर्ुबको जनजिबन थप कष्टकर बनेको छ ।
बन्दले बजारहरुमा खाद्यन्न लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाब हुन थालेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रहरुमा औषधी उपचारको अभाब भएको बताइएको छ । विभिन्न अस्पतालमा रहेका बिरामी कुरुवाहरु घर र्फकन नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् ।
यता बजार कलकारखाना बन्दहुदा मजदुरी गरेर जिबन चलाउने मजदुरहरुको बिजोग भएको छ
स्वतन्त्र बिधार्थी युनियनको निर्बाचनका क्रममा गत बिहीबार झापाको धुलाबरी क्याम्पसमा प्रहरी संगको झडपमा परी मृत्यु भएको लिम्बुवान संम्बद्द बिधार्थी मनिल तामाङ लाइ सहीद धोषणा गर्नु पर्ने र गृह मन्त्रिले राजीनामा दिनु पर्ने लगाएतका माग गर्दै लिम्बुवान सम्बद्द संगठनहरुले बन्दको आब्हान गरेका हुन् ।
यस्तै बिभीन्न १० सुत्रिय माग राख्दै आन्दोलमान उत्रिएको पिछडा बर्ग माहासङगको बन्दका कारण सुनसरी सप्तरी सिराहा क्षेत्रमा यातायात चल्न सकेका छैनन् ।
माहासंघको बन्दको दोस्रो दिन आज पनि र्सलाही,सिराहा,सप्तरी,सुनसरी र मोरगंको जनजिवन प्रभावित भएको छ । पिछडा वर्गलाई आरक्षण लागु गर्नुपर्ने, सरकारी स्तरमा पिछडा वर्ग प्रतिष्ठान गठन गरिनु पर्ने, सम्पर्ूण्ा जाति, भाषा संविधानमा समेट्नु पर्नेलगायतका माग राख्दै बन्द गरेको हो ।
पटक-पटक गरिएको बन्दका कारण तर्राईमा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । बन्दका कारण तर्राईमा शिक्षण संस्था, कलखारकाना, व्यवपार तथा यातायात सुचारू हुन नसक्दा जनजीजवन अस्तव्यस्त भएको छ ।
उता क्रान्तिकारी विधार्थीहरुले सखुवासभामा सभासद चढेको गाडीमा तोडफोड गरेका छन ।
वन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै वा ४ च ९१२२ नम्वरको गाडीमा तोडफोड गरेका हुन ।
सभासद डम्वर वहादुर खड्का लगायत चार जना सभासद चढेको गाडीमा कान्तिकारी विधार्थीहरुले तोडफोड गरेको सखुवासभा जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । स्ववियु चुनावमा भएको झडपको विषयलाइ लिएर क्रन्तिकारीले संखुवासभा बन्दगर्दै आएका छन ।
लिम्बुवान कार्यकर्ताले ताप्लेजुङ जिल्लाका आधा दर्जन सरकारी कार्यालयमा ताला बन्दि गरेका छन् । यता स्ववियु निर्वाचनको विरोध गर्दै लिम्बुवान विद्यार्थी परिषदले चार दिनअघि झापाको सुरुङ्गास्थित कनकाई क्याम्पसमा लगाएको ताला आज स्थानीय बासिन्दाले तोडिदिएका छन् ।
यसैविच संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदले भोली देखी मोटरसाइकल र पसल भने खोल्न दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । आज बसेको परिषदको बैठमले त्यस्तो निर्ण्र्ाागरेको संघिय बिद्यार्थी परिषदका लोक सागर साम्बाले बताउनु भयो ।
धनकुटामा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताहरुबीच झडप भएपछि उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्न प्रशासनले आज बिहान २ घण्टाका लागि हटाएको कफर््यु फेरी लगाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले धनकुटाले आज बिहान साढे ११ बजे देखि लागू हुनेगरी अनिश्चितकालीन कर्फयु आदेश जारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
वाईसिएल र एमाले कार्यकर्ताबीच हिँजो भएको झडपमा आधा दर्जन घाइते भएपछि उत्पन्न तनावलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशाशनले हिँजो साँझ सात बजेदेखी लगाएको कफर््र्यू आज विहान साढे नौ बजेदेखी साढे ११ वजेसम्मका लागि हटाएको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रि गोपाल शाक्यले राष्टिय एकताकालागी खेलाडीहरु एकजुट हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । धरानमा पर्ुवाञ्चल स्तरीय बास्केटबल प्रतियोगीताको छनौट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्रि शाक्यले राष्टिय एकताकालागी खेलाडीहश्रको महत्वपर्ुण्ा भुमिका हुने बताउनु भयो ।
उहाले खेलको विकासका लागी सरकार सधै खेलाडीको साथमा रहेको पनि बताउनु भयो ।
नेपाल-भारत सुरक्षा अधिकारीहरुको भारत अररिया जिल्लाको बथनाहामा दिउसो भएको बैठकमा आगामी २८ गते मोरङको क्षेत्र नम्बर ५ र ७ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि ३६ घण्टा सीमा बन्द गर्ने सहमति गरेका छन् । चैत २७ गते बिहानदेखि २८ गते बेलुकासम्म सीमा बन्द गर्ने दुबै देशका अधिकारीहरुले सहमति गरेका छन् ।
सखुवासभाका सप्तकोशी सहकर्मी किशेार वुढाथोकी विस्थापित हुनु भएको छ ।
नेक पा माओवादीका सदस्य कुवेर प्रसाद भेटवालले स्ववियु निर्वाचनमा क्रान्तिकारी विधार्थीको समाचार नलेखेको भन्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि सहकर्मी किशोर वुढाथोकि आज धरान आइपुग्नु भएको छ ।
उहा चैत ६ गते स्ववियु निर्वाचनको चुनाव भएको दिन भागेर आज धारान आइपुग्नु भएको हो
धरानमा आज नेपाल पत्रकार महासंघ पर्ूवाञ्चलका संयोजक किशोर कुमार कार्की ,नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका सभापति राजेश व्रि्रोही र प्रेस चौतारी सुनसरीका उपाध्यक्ष भीम र्राई ज्वालालाई भेटेर उहाँले आफ्नो जिवन रक्षाका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी र प्रेश चौतारी सुनसरीले आज छुट्टा छुट्टै प्रेश विज्ञप्ती प्रकाशन गरेर पत्रकार बुढाथोकीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको बिषयमा भर्त्सना गरि दोषीलाई कार्वाहीको माग गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले सुझाव संकलनका लागि जिल्ला आएको सभाषद्हरुको टोलिलाई विभिन्न सात बुदें सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघले बिराटनगरमा आयोजना गरेको छालफल कार्यक्रममा संविधान सभा सुझवा संकलनका लागि मोरङ र भोजपुर जिल्लामा खटिएको टोली संयोजक लालबाबु पंडित सहितको समुहलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहितको सुझाव पेश गरेको हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानीक प्रत्याभुतीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुचनाको हक व्यापक रुपमा लागु गरिनुपर्ने, सरकारले संचारमाध्यम संचालन गर्न नहुने, नियमीत रुपमा प्रकाशीत नहुने पत्रिकाहरुको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, लगायतको सुझावहरु दिएको छ भने विदेशि लगानीमा संचार माध्यम संचालन गर्न नहुने व्यवस्थागर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी मोरङमा १० दिन खटिएको टोलिले २ लाख भन्दा बढी सुझाव संकलन गरेर फर्किएको छ ।
सभाषद्हरुलाई बिराटनगरका वालवालिकाहरुले पनि सुझाव दिएका छन् ।
वालवालिकाहरुले विपन्न तथा सिमान्तकृत , दलित र श्रमिक वालवालिकाहरुलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सुझाव दिन बिराटनगर र ग्रामिण क्षेत्रका करिव ५० अपाङ्गता भएका र श्रमिक तथा विपनन वर्गका वालवालिका उपस्थित थिए ।
सुनसरीको इनरुवामा कलेज बस दर्ुघटना हुदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना घाइते भएका छन् ।
विश्व आदर्श कलेज इटहरीका विधार्थीलाइ घर पुरयाउन हिडेको ना ३ ख १९२९ नम्वरको वस सुनसरीको इनरुवा स्थित सखुवा गाछीमा दर्ुघटना हुदा एलिसा श्रेष्ठ मृत्यु भएको हो ।
दर्ुघटनमा गम्भीर घाइते भएकी श्रेष्ठको उपचारका लागि धरान लैजादै गर्दा बाटैमा मृत्यू भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते भएका सवैको अहिले विपी कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ । घाइते मध्ये चार जानको अवस्था गम्भिर रहेको प्रतिस्ठान प्रहरीले जनाएको छ ।
यसै गरि ट्रकबाट खसेर विराटनगरमा एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
इर्स्र्टन सुगर मिल सुनसरीको ना १ ख ८४६३ नम्बरको ट्रकबाट खसेर खलासी नितेस लाखेको मृत्यु भएको हो ।
ट्रकबाट खसेर घाइते भएका लाखेको उपचारका क्रममा कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा कृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
उता सुनसरीको सोनापुरमा बा १ ख ७४४८ नम्बरको मिनिबसको ठक्करबाट २ जना घाइते भएका छन । बसको ठक्करबाट साइकलमा सवार मोरङको केरौनका जयराम राजवंशी र उहाकी बहिनी अन्जु राजवंशी घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ । दुवैजनाको धरानमा उपचार भैरहेको छ ।
उतासप्तरीको राजविराज स्थित भलवाइ व्यारेकमा कार्यरत शैनिक जवान मृत फेला परेका छन । विहान ड्युटीमा रहेका शैनिक जवान शंकर तिम्सीना मृत अवस्थामा फेला परेका हुन । भोजपुर घर भएका २४ बषिर्य तिम्सीनाको मृत्युको कारण सेनाले खुलाएको छैन ।
इटहरीको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल क्रन्तिकारी र नेविसंघले गरेको तालाबन्दि तत्काल खोल्न अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।
क्याम्पसमा तालाबन्दि हुदा बिद्यार्थीको पठन पाठनमा अवरोध भएको भन्दै अनेरास्ववियुको प्रंारम्भिक कमिटी जनता क्याम्पसले तालाबन्दि खोल्न माग गरेको हो ।
नेपाल बिद्यार्थी सङघ र आखिल क्रान्तीकारीले जनता क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन पुन हुनु पर्ने माग राख्दै तालान्दि गरेका हुन ।
निर्वाचनको परिणाम एकलौटी धाँधली पर्ुण्ा भएको भन्दै निर्वाचन नभए सम्म आन्देालन गर्ने चेतावनी सहित उनिहरुले तालाबन्दि गरेका हुन ।
गत ६ गते सम्मपन्न स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियुका सभापति उमेद्धार पुनम चौधरी सहित प्यानल नै विजयी भएको थियो ।
Posted by सप्तकोशी No comments: Links to this post
राती १० बजेको सेरोफेरो चैत २
मोरङको टंकी सिनवारीमा अस्ति भएको दर्ुघटनामा मृत्यु हुने नेपाली कग्रेसका सभाषद बोधनारायण सरदारको भएको पुष्टि भएको छ ।
गत शुक्रबार मोरङको टंकी सिनवारीमा दर्ुइ मोटरर्साईकल एक आपस ठक्कर खाई भएको दर्ुघटनामा मृत्यु हुने २ जनामध्ये सनाखत हुन नसकेका अर्का १ जना नेपाली कांग्रेसको समानुपातीक सभासद बोध नारायण सरदार भएको पुष्टि भएको हो ।
सुनसरीको मधेली ५ घर भएका ३५ बषिर्य सभाषद सरदार ३ दिनसम्म घरमा नआएपछि आफन्तले खोजी गर्ने क्रममा आज दर्ुघटना भएको उहाको को ४ प ६७७८ नम्बरको मोटरर्साईकल मोरङको निमुवा स्थित प्रहरी चौकीमा फेला परेपछि सो दर्ूघटनामा मृत्यु हुने सभासद सरदार रहेका पुष्टि भएको हो ।
बिराटनगरबाट इटहरी तर्फआईरहेको को ४ प ६७७८ नम्बर र विपरित दिशातर्फजादै गरेको को ५ प ४११० नम्बरको मोटरर्साईकल अस्ति बिहान करिब सभा १० बजे एक आपसमा ठक्कर खादा दुहवी ९ का लोकेश पोख्रेल र सभासद सरदारको मृत्यु भएको थियो ।
पाख्रेलको उपचारको क्रममा धरान स्थित बिपि कोईराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको हो भने सभासद सरदारको र्घाईते भई उपचार गर्न लैजादै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको थियो ।
यसैबिच निमुवा प्रहरी चौकीले घटनालाई दवाएको भन्दै स्थानियबासीले साझकोशी राजमार्ग अवरुद्ध पार्दै निमुवा प्रहरी चौकीमा पर््रदर्शन समेत गरेका छन् ।
सोहि घटनाका बिषयलाई लिएर ट्रेड युनियन कांग्रेस सुनसरीले आपत्ति जनाएको छ ।
घटना दवाउने प्रयास गरेको भन्दै युनियनले घटनाको स्पष्ट छानबिन नगरेसम्म मजदुरहरुले आन्दोलन जारी राख्ने पनि युनियनका सुनसरी सचिव अयुव हुसेनले बताउनु भयो ।
प्रहरीले सभासदसँग रहेको नगद ६२ हजार, डेढ तोलाको सुनको सिक्रि र आधि तोलाको औठि समेत लुकाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सोहि सामग्रीको खोजबिन हुने आशंकामा प्रहरीले घटनालाई लुकाएको हो ।
धनकुटाको भेडेटारमा दिउसो भएको आगलागीमा परि ६ घर जलेर नष्टहुदा ११ लाख बढिको क्षती भएको छ ।
दिउसो र्सवजित राइको घरबाट आगलागी भएको हो । आगलागीमा परि स्थानिय गुणराज लिम्बु, वीर बहादुर राइ, अर्जुन राइ, रतन राइ र विश्वराज राइको घर जलेको हो ।
घरसगै अन्न लत्ताकपडा र गर गहना जल्दा ११ लाख बढिको क्षती भएको प्रहरीको भनाइ छ । स्थानियबासी र प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
जिल्ला प्रसासान कार्यलय सुनसरीले आज देखी स्वेच्छिक घर र्फकन चाहने कोसी पिडीतलाइ प्रति परिवार ५० हजार रुपौयाका दरले राहात बितरण शुरु गरेको छ ।
पहिलो दिन ६५ परिवारे राहात बितरण गरेको जिल्ला प्रसासान कार्यलय सुनसरीले जनाएको छ । कोसीले गएको भदौ दुइ गते पर्ुर्वी तटबन्ध भत्काउदा बिस्थापीत भएकोहरुलाइ घर बनाृउन सो रकम दिने ४ महिना अघि निर्ण्र्ाागरेको थियो ।
सरकारले घर फिर्न चाहानेहरुलाई जिल्ला प्रसासन कार्यलय सुनसरीमा निवेदन दर्ता गराउन लिखीत निवेदन माग गरेपछि
२६ सय २२ कोसी बिस्थापीत परिवारले निवोदन दर्ता गराएका थिए ।
एक महिना अघि नै निवेदन दर्ता गराउन जिल्ला प्रसासन कार्यलय सुनसरीले सुचना टास्ा गरे शुरुमा कोसी बिस्थापीतले सो रकम अपुग भएको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।
बिवाद र अवरोधका बावुजुत पनि घर फिर्न चाहानेहरुको सङख्या भने उल्लेख्य रहेको जिल्ला प्रसासन कार्यलय सुनसरीले जनाएको छ ।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरेकृष्ण उपाध्यायले निवोदन परेक मध्यो छानवीन गर्दा बास्तबीक कोसी पिडीत ठहरीए सो राहात बितरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोसी पिडीतहरुको शिवीरमा गएर र यस अघि सकलन गरेको तथ्याङकको अधारमा राहात रकम बितरण गरिने बताउनु भयो ।
उपस्वास्थ्य चौकीमा अहेव नबसे पछि समयमा उपचार हुन नसक्दा खोटामा एक विरामीको मृत्यू भएको छ ।
समयमा उपचार हुन नसक्दा खोटाङको च्यास्मिटार-७ घरकी १५ वषिर्य नमिता
र्राईको दिउसो जिल्ला अस्पताल खोटाङमा मृत्यू भएको हो । गत १२ दिन अघि देखि विरामी भएकी उनको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल ल्याएपछि मृत्यु भएको बताईएको छ । त्यस उपस्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेव राजकिशोर शाह १५ दिन अघि देखि विदामा घर गएपछि विरामीको उपचार हुन नसकेको हो ।
सुझाव संकलनका लागि मोरङको पथरीपुगेको टोलिलाई संघिय लिम्वुवान परिषद्का कार्यक्रताले काम गर्न अवरोध गरेका छन् ।
परिषदका कार्यक्रताले सुझाव संकलन कार्यका लागि गएको टोलीले लगेका नमुना सुझाव पत्र समेत जलाइ दिएका छन ।
सभाषदले लगेका संविधानसभाको सुझावका प्रश्नपत्रहरु सभाषदबाट खोसेर परिषदका कार्यत्रलताले जलाइ दिएका हुन । सुझाव संकलनका लागि गएको सभाषद् लालबहादुर सुस्लिङ मगरको टोलीलाई अवरोध गरेपछि सुझाव संकलन कार्य पनि स्थगित भयो ।
यस्तै सुझाव संमलनकालागी पाचथरको सुभाङ र भारपा पुगेका सभाषदलाइ पल्लो किरात लिम्बुवान राष्टियमञ्चका कार्यक्रताले अवरोध गरेका छन ।
इटहरीमा भैरहेको पर्ुवाञ्चल खेलकुद महोत्सवबाट प्रहरीले साझ एक जनालाइ हतियार सहित पक्राउ गरेको छ ।
साझ साढे सात बजे नाइन एमएमको इटालीयन पेष्तोल सहित मोरङको शनिश्चरेका सन्तोष केशी पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
अनियमित रुपमा विद्युत आपर्ुर्ति बन्द गरेकोे भन्दै पश्चिम दक्षिण झापाको ग्रमीण भेगका उपभोत्ताहरुले नेपाल विद्यत प्राधिकणको दमक शाखा कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
अपरान्ह गौरादह, गौरीगञ्ज, खजुरगाछी, लखनपुर, लगायत गाबिसबाट आएका उपभोत्ताहरुले लोडसेडिङको समयभन्द बढी बिद्यत कटौति गरेको बिरोधमा कार्यालय घेराउ गरि प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
२ सय बढी सख्यामा रहेका उपभोत्ताहरुले कार्यलयका सम्पर्ुण्ा प्रशासनिक कार्यलयमा केही समय धर्ना समेत दिएका थिए ।
उनीहरुले लोडसेडिङको समय बाहेक अनियमित तवरले विद्युत काटिए शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गौरीगन्जका उपभोक्ता लक्ष्मी राजवंशीले अनियमित रुपमा विद्युत काटिँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरे ।
संखुवासभाका कृषकहरुले नापीले छुट गराएको जग्गा दर्ताको माग गर्दै आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
उनिहरुले रणबहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा एक सय एक सदस्यीय जग्गा छुट दर्ता संर्घष्ा समिति गठन गर्दै सो माग गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फ उनिहरुले प्रधान मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । उनिहरुले २०३५ सालको नापीले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न छुटाएको जग्गा दर्ता हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
व्यक्तिको जग्गा सामुदायीक बनाउन लागिएको भन्दै उनिहरुले समिति गठन गरेर आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएका छन् । मालपोत तथा जिल्ला प्रशासन समेतले स्थानीयको आवाज नसुनको दावी गर्दै संर्घष्ा समितिले त्यस्का लागि जिल्ला मालपोत र प्रशासनमा दवाव समेत दिएका छन् ।
झापाको दमक स्थित बेलडाँगी भुटानी शिविरमा आगोले जलेर नष्ट भएका छाप्रा सफा गर्ने र खरानी हटाउने काम शुरु भएको छ ।
भुटानी शरणार्थीको पर्ुनस्थापनाको कार्य शुरु गर्न आजबाट सरसफाईको काम शुरु भएको बेलडाँगी २ सचिव नारमुनी सन्यासीले बताउनुभयो ।
दाता निकाय लुथरन विश्व फेडेरेसनले पाल वितरण गर्न शिविरसम्म पर्ुयाएको छ । तर अस्थाइ आवास निमार्ण्र्ााार्य भने शुरु भई नसकेको शिविर व्यवस्थापन कार्यालय ले जानकारी दिएको छ ।
तत्काललाई प्लाष्टिकका पालमा शरणार्थीको बसोवास मिलाउन दाताले काम थालेका छन् । बेलडाँगीमा गत बुधवार भएको आगलागिमा परी २ सय १४ छाप्रा जल्दा एक हजार भन्दा धेरै शरणार्थीको विचल्ली भएको छ ।
कतिपय शरणार्थीले आफन्त र छिमेकीकोमा शरणा लिए पनि बालवच्चा र बृद्धवृद्धालाई भने समस्या भएको छ ।
युथ थ्रीस्टार क्लब काठमाण्डौ मोरङ्को बिराटचौकमा सञ्चालित नेपाल-भारत आमन्त्रित प्रथम केबीआरयु कन्दङ्वा स्मृति गोल्डकप फुटबल प्रतियोगीताको सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
आज भएको प्रतियोगीताको अन्तिम क्बाटरफाइनल खेलमा धनकुटा फुटबल क्लबलाई ट्राइबेकरमा चारका बिरुद्ध पाँच गोलले हराउर्दै युथ थ्रीस्टार सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
निर्धारित खेलमा थ्रीस्टारका प्रवीण कार्की र धनकुटाका सुमन र्राईले एक/एक गोल गरेर खेल बराबरीमा टुङगिए पछि थपिएको अतिरिक्त समयमा दुवै टीमले गोल गर्न नसकेकोले खेल ट्राइबेकरमा परिणत भएको थियो ।
ट्राइबेकरमा युथ थ्रीस्टारका प्रवीण कार्की, विवक गुरुङ्, सोनाम लामा, टंक लामा र हेम माझीले गोल गरे । युथ थ्रीस्टारका केशब सेरचनले प्रहार गरेकेा बल भने गोलमा परिणत हुन सकेन् ।
धनकुटाका तर्फाट सुदिप बस्नेत, सुदीप उराव, सागर घिमिरे र बद्री र्राईले गोल गरे । धनकुटाका सुमन श्रेष्ठ र उमेश र्राईले प्रहार गरेको बल भने गोलमा परिणत हुन सकेन् ।
आजको प्रतियोगीतामा युथ थ्रीस्टारका सन्तोष लाङ्घाली म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
मोरङको उर्लावारीमा जारी पर्ुवाञ्चल स्तरिय रिकभरिङ फुटवल प्रतियोगीताको आजको खेल मोरङको बेलबारी रिकभरिङले जितेको छ ।
खेलमा आज इटहरी रिकभरिङलाइ १ का विरुद्ध ११ गोलको भारी अन्तरले हराउदै बेलबारी दोस्रो चरणमा प्रवेस गरेको हो ।
आजको खेलको म्यान अफ द म्याच बेलबारीका डेनी लिम्बु भए ।
प्रतियोगीतामा पर्ुवका आठवटा रिकभरिङ समुहको सहभागीता रहेको आयोजक समितीका संयोजक प्रेमचन्द राइले बताउनु भयो ।
राती १० बजेको सेरोफेरो, फागुन २४
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनरत थारु समुदायका जुनसुकै मागमाथि वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै आन्दोलनका सम्पर्ूण्ा कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्तामा आउन आब्हान गर्नुभएको छ ।
साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञप्ती निकालेर आन्दोलनरत थारु समुदायलाइ वार्तामा आउन आग्रह गर्नु भएको हो ।
विज्ञप्तीमा केही दिनदेखि आफ्ना विभिन्न माग राखी मुलुकका विभिन्न भागमा संयुक्त थारुहट संर्घष्ा समिति, संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु संर्घष्ा समिति, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, थारु कल्याणकारी परिषद्, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघलगायतका संघ/संस्थाले गरेको आन्दोलनप्रति नेपाल सरकार अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै वार्ताका माध्यमबाट नै सम्पर्ूण्ा समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको जनाईइको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षत्रि्रति आफु अत्यन्त दुःखीत भएको बताउँदै पीडित पक्षलाई उचित राहत, क्षतिपर्ूर्ति तथा सम्मानको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । साथै आन्दोलनको दौरानमा भएका घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको पनि प्रधानमन्त्री द्वारा जारी विज्ञत्तीमा उल्लेल छ ।
यता थारुवान संयुक्त र्सर्ंघष समितिको ६ दिन देखी जारी बन्दले तर्राईका जिल्लाको जनजिवन कस्टकर बनेको छ ।
बन्दकर्ताहरुले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-७ मोतिगडामा दिउसो एउटा ट्याक्टर तोडफोड गरेकाछन् ।
गाईघाट बजारबाट ढुंगा बोकेर मोतिगडा तर्फजाँदै गरेको को १त २११० नम्बरको बन्दकर्ताहरुले तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक पशुपतिनाथ डोटेलले बताउनु भयो । बन्दका कारण सिराहाको लाहानमा चार सय बढि यात्रु अलपत्र परेका छन ।
बन्दले मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर लगायतका तराइका जिल्लाको जनजिवन कस्टकर बनेको छ । सुनसरीको लविपुरमा वन्द कर्ताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छादा।रको पुत्ला दहन गरेको द्धारिकालाल चौधरीले वताउनु भयो ।
छ दिन देखीको बन्दले तराइका जिल्लामा दैनिक उपभाग्यवस्तुको अभाव हुन थालेको छ । तरकारी र अन्य खाद्य बस्तुको मुलय पनि आकाशीएको छ ।
बन्द लम्बिदै जाँदा र्सवसाधारणको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ र्।र् इन्धनको अभावमा एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यकीय सवारी साधन पर्याप्तमात्रामा संचालन हुन सकेका छैनन् ।
यता थारुवान राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले आज विराटनगरमा विरोध जुलुश पर््रदशन गरेको छ ।
यसैविच संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदले थारुहरुको आन्दोलन प्रति ऐक्येबद्धता जनाएको छ ।
दिउसो धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरि थारुहरुको माग सम्बोधन गर्न र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाइ उचित क्षतिपर्ुर्ती दिन माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषदका अध्यक्ष संजुंहाङ पालुङ्वाले थारुलगायत अन्य जनजातीकोमाग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक थारुसंघ सुनसरीले पनि विज्ञप्ती जारी गरि थारुहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्येबद्धता जनाउदै आन्दोलनमा चितवनमा मारिएकालाइ सहिद घोषणा गर्न र घाइतेलाइ क्षतिपर्ुर्ति र उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ्गले एक्ला एक्लै हिडेर र आपसमा आलोचना गरेर दलह/m अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
संविधान निर्माणको चुनौति सामना गर्न सबै राजनीतिक दल र विभिन्न समुदाय एक भएर हिड्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो ।
पर्ुवाञ्चल मुस्लिम भेलालाई आज बिराटनगरमा सम्वोधन गर्दै उहाँले एक जुट भएर लक्ष्य तर्फअगाडि बढेमात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो ।
नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अभियान संचालन भैरहेको बेला मुस्लिम र अन्य जाती तथा जनजातीहरुले संचालन गर्ने अभियानलाई संविधान निर्माण अभियानसंग जोड्न उहाँले आग्रह बताउनुभयो ।
संविधान सभाले संविधान निर्माणको काम निर्वाध ढंगले अगाडि बढाइरहेको बताउनुहुदै संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ्गले २०६७ साल जेठ १४ गते भित्र संविधान निर्माण भैसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संविधान सभाले गठन गरेको सबै समितिहरुमा मुस्लिमहरुलाई सहभागि गराइएकोले अब बन्ने संविधान मुस्लिमको संविधान हुने र त्यसले मुस्लिमहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुस्लिम नेताहरुले मुस्लिम समुदायलाई मधेशीमा सुचिकृत गर्ने सरकारी निर्ण्र्ााो विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
प््राश्नावली कम भएको भन्दै स्थानियलर्ेर् इटहरीमा संविधानसभा सुझाव सँकलन कार्य केहिवेर अवरुद्ध पारे ।
कार्यक्रम अवरुद्ध भए पछि बसेको र्सवदलिय बैठकले भोलीदेखी नगरपालीका कार्यलयबाट पार्टर्ीी तथा संस्थागत रुपमा प्रश्नमवली उपलव्ध गराउने सहमती पछि सुझव संकलन कार्य पुन सुरु भयो
प््राश्नावली वितरण पछि चैत सात गते सभासदहरुको टोृलीसंग पुन छलफल गर्ने सहमती पनि भएको छ । कार्यक्रममा बिजुली नभएर प्रश्नवाली समेत तयार पार्न नपाएको सभाषदहरुले बताएपछि कार्यक्रममा सहभागीहरुले होहल्ला गरेर अवरोध गरेका हुन । र्सवसाधारणले सवैले आफ्नो मत र सुझाव राख्न पाउनु पर्छ भन्दै सभाषदहरुलाइ समेत घेराउ समेत गरे ।
उताजनमत संकलन टोलीलाई झापाका विभिन्न ठाउँमा पल्लो किरात लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चले आज अवरोध गर्यो ।
मञ्चले मेचीनगरको धुलाबारीमा आयोजित कार्यक्रममा समय माग्दै जनमत संकलन कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । सभासद विश्वदीप लिङदेनको नेतृत्वमा रहेको टोलीलाई प्रश्नावली भरेर कुनै औचित्य नहुने भन्दै अवरोध सिर्जना गरिएको मञ्चका सूचना तथा संचार विभाग प्रमुख हस्त केरुङलेजनाउनु भएको छ ।
यसअघि धरमपुर, शान्तिनगर र तोपगाछीमा पनि मञ्चले सभासदको टोलीलाई अवरोध सिर्जना गरिसकेको थियो । उनीहरुले लिम्बूवान भूमि स्वतन्त्र घोषणा भइसकेकाले नयाँ संविधान लेखनका लागि जनमत संकलन गर्न नआउन पहिल्यै चेतावनी दिइसकेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य सुजाता कोइरालाले माओवादीले आफ्नो ब्यवहार र कृयाकलापमा सुधारगरेर सहमती र सहकार्यको राजनितीनगरे कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ ।
विराटनगर बिमानास्थलमा दिउसो संचारकर्मीसंग कुरागर्दै नेतृ कोइरालाले माओवादी राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर संघियताका नाममा मुलुक टुक्राउने खेलमा उद्यत रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ ।
माओवादी प्रति निकै आक्रामक देखिनुभएकी कोईरालाले वाईसीएलको अराजक गतिविधि नियन्त्रणनगरे, एकलौटी रुपबाट मुलकलाई खण्डित पार्नेकाम जारीराखे काग्रेस आन्दोलनमा होमीने स्पष्ट पार्नुभयो ।
माओवादीले सहमती र सहकार्यको राजनीती छोडेर एकदलिय अधिनायकवादबाट मुलुक चलाउन खोजे यो सरकारको बिकल्प खोजीने समेत बताउनु भयो ।
माओवादी लडाकु भर्नाप्रकृया तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँदै कोइरालाले पार्टर्ीीे अध्यक्ष र सरकार प्रमुख भएरपनि प्रचण्डले आफ्ना लडाकु भर्नाप्रकृया रोक्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
धनकुटाको मुलघाटमा वनभोज खान गएका धरानको इर्स्र्टन पोलीटेक्निक टे्रनीङ सेन्टरमा सिभील ओभर सियरका विद्यार्थी सन्तोष लामीछाने तमोर नदिमा डुवेु वेपत्ता हुनुभएको छ ।
टे्रनीङ सेन्टरबाट वनभोज गएका लामिछाने नदिमा पोडि खेल्नेहुदा बगाएर बेपत्ता हुनुभएको शिक्षक चन्द्रमणि मगरले बताउनु भयो ।
झापाको भुटानी सरणर्थी सिविरका लामिछाने धरानमा बसेर सव ओभरसियर पढ्दै आउनु भएको थियो । डुवेर बेपत्ता लामिछानेको खोजी भैरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आफ्नो अस्तीत्व रक्षाका लागी थारुहरुले गरेको आन्दोलन जायज रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले सबैले आफ्नो अस्तीत्व पाउन लडाइँ गर्नुपरेको स्मरण गर्दै आन्दालनको प्रकृति केही सुधानू पर्ने धारणा अघि सार्नुभयो ।
आज झापा र इलाममा छुट्टै कार्यक्रममा बोल्दै उहँाले बर्तमान सरकारलाई ढाल्न चारै दिशाबाट प्रसितकृयाबादीहरु सलबलाइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
पत्रकारहरु सँग कुरा गर्दै सेना विवाद अन्त्य गरी तुरुन्त सेना समायोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकार कसैले टिका लगाइदिएको भरमा नचल्ने दाबी गर्दै मन्त्री पोखरेलले सबैको सहयोगले नै सरकार चलानउन सजिलो हुने बताउनुभएको छ ।
आँखाको बढी जाँच हुने अस्पतालमध्ये एशियामैे दोश्रो स्थानको रुपमा रहेको सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहानमा मात्रै एक बर्षो अवधिमा एकलाख १३ हजार ३ सय २४ जना आँखाका रोगीको उपचार गरिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरि अस्पतालको बिराटनगर शाखाले ९२ हजार ६२ जना रोगी सहित जम्मा २ लाख ७९ हजार ५सय९० जनालाई सेवा पुरयाएको पर्ूवान्चल क्षेत्रीय आँखा उपचार कार्यक्रमका संयोजक बिन्देश्वर महतोले जानकारी दिनुभएको छ ।
अस्पतालले आज एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै सन् २००८ को अबधिमा सो संख्यामा उपचार सेवा प्रदान गरिएको जनाएको हो ।
बालआश्रम र कवर्ड हल निर्माणका लागि झापाको विर्तामोडमा आयोजित श्रीमद भागवत ज्ञान महायज्ञको छैठौ दिन आज १४ लाख बढी सहयोग संकलन भएको छ ।
एकल महिला समूह र नागरिक समाजको आयोजनामा फागुन १८ गतेदेखि आयोजित सप्ताहव्यापी महायज्ञमा र्सवाधिक चन्द्रप्रसाद बजगाईले ५ लाख रुपैयाँ सहयोगगर्नुभएको छ । त्यस्तै, राधाकृष्ण मैनाली, डम्बर थापाले एक लाख एकाउन्न हजार एक रुपैयाँ/ एक लाख एकाउन्न हजार एक रुपैयाँ, तिलक गिरीले एक लाख एक हजार एक, राजेन्द्र थापाले एक लाख, पर्ूण्ा, राधा सुब्बा ५१ हजार, पवन खेडियाले ५० हजार एक सय एक रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ ।
भ्ाुजेलहरुको पर्ुवान्चल स्तरीय भेलाले ७ वुदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
भ्ेालालेे सघीय प्रणाणी प्रान्तीय स्तरमा २ सदनात्मक व्यावस्था र माथिल्लो सदनमा जातीय सभा हुनु पर्ने , भौगोलिक , आर्थिक र प्राकृतिक श्रोत र साधनको आधारमा सघीयाता विभाजन हुनु पर्ने , भुजेल जाती लगायत अन्य जात जातीको भाषा र सस्कृतिलाइ राष्ट्रले राष्ट्रिय सम्पतीको रुपमा सम्रक्षण र सम्वद्धन गर्नु पर्ने , कुनै पनि एक जाती वा समुदायलाइ राज्य सन्चालनमा अग्राधिकारको व्यावस्था गरिनु पर्ने लगायतका माग राखीै ७ वुदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो । भ्ुाजेल समाज सेेवा समितिको आयोजनामा भएको सो भेलामा लक्ष्मण भुजेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
झापाको युनाइटेड युथ कल्वले सुनसरीको इनरुवामा जारी डा केशरी राज कोइराला गोल्डकपको उपाधी चुमेको छ ।
धरान फुटवल कल्वलाइ सुन्यका विरुद्ध एक गालले हराउदै युनाइटेडले उपाधी उपाधी चुमेको हो । झापाकालागी अमित लोक्तमले मध्यान्तर अगाडीको २१ मिनेटमा गरेको गाल नै निर्ण्र्ाा गोल बन्यो । आजको खेलको म्यान अफ द म्याच युनाइटेडकै आजाद प्रधान भए ।
उपाधि विजेताले नगद १५ हजार र प्रमाणपत्र उप विजेताले १० हजार र प्रमाण पत्र हात पारेका छन .
विहान नौ बजेको सेरोफरो, फागुन २४
थारुवानको लगातारको वन्द आज छठौ दिन पनि जारी छ । आज पनि तर्राईका जिल्ल्ाामा बिहानैदेखि गाडी चलेका छैनन । इटहरी पर्ूव र धरानदेखि पहाडी जिल्ल्ाामा भने यातयात चलिरहेको टाफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
थारुवान संर्घष्ा समितीकोे छठौ दिन देखीको वन्दले जनजीवन भने थप कष्टकर वनेको छ । बन्दले र्सवसाधारणले सास्ती खेप्पुपरिरहेको छ । सयौ यात्रीहरु र सवारीका साधन सडकर्मै अलपत्र पर्दा गन्तव्य स्ूथानमा पुग्न सकेका छैनन् । थारुहरुले गरेको लगातारको आन्दोलनबाट तनावग्रस्त बनेको चितवनका विभिन्न ठाउँहरुमा आज विहानैदेखि पर््रदर्शन भइरहेको छ ।
त्यस्तै आन्दोलनकारीहरुले नारायणगढ-हेटौडा सडकखण्ड, रत्ननगर चोक र सौरहाचोकमा पनि टायरबालेर पर््रदर्शन सुरु गरेका छन् । बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै नवलपरासीमा बिहान थारु कार्यकर्ताले एक जीपमा आगजनी गरेका छन । दर्ुइ वटा सवारी साधनमा तोडफोड गरिएको छ ।
बन्द आव्हानकर्ताहरुले अवज्ञा गरेको भन्दै पर्ुबपश्चिम राजमार्ग अर्न्तर्गत नवलपरासीको तिकलपुर- १ तुलसीनगरमा पश्चिमबाट पर्ूवतर्फआउँदै गरेको बा. १. झ. ८१०५ नम्बरको टोयटा जीपमा आगजनी ग्ारेको प्रहरीले बताएको छ ।
यस्तै बन्दको अबज्ञा गरेको भन्दे थरु कार्यकर्ताहरुले नवलपरासीको दुम्कैलीस्थित रजहरमा ना. १. ख. ८५८६ नम्बरको बस र बा. १. झ. ८१०५ नम्बरको एम्बुलेन्समा तोडफोड गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
वन्द अवज्ञा गरेको भन्दै थरुहटका कार्यकर्ताहरुले गएराती दाङको लमहीमा दुइ वटा मोटरसाइकलमा आगजनी गरेका छन । थरुहट कार्यकर्ताले लु १ प ५९७५ र रा १ प ३३८८ नम्वरको मोटरसाइकलमा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्याल्ाय दाङले जनाएको छ ।
त्यसक्रममा बन्दकर्ताले मोटरसाइकलमा सवार दुइ जनालाई निर्घर्ााकुटपिट पनि गरेका छन । वन्दकर्ताल्ो दाङको लमहीमा रहेको कृषि सामग्री संस्थानमा पनि आगो लगाएका छन । आगजनीबाट त्यहा राखिएका २ सय बढी रासायनिक मल जलेर नष्ट भएको छ ।
यता बिरामी बोकेर जादै गरेको रा १ ज २८५ नम्वरको जीपमा गएराती बन्दकर्ताहरुले दाङको नारायणपुरमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ
सरकारले आन्दोलनका कारण बन्द राजमार्ग सुचारु गर्न आजबाट राजमार्गहरुमा कडा सुरक्षा ब्यावस्था मिलाउने भएको छ ।
तर्राईका जिल्लाहरुमा भइरहेको थारु समुदायको पर््रदर्शनले हजारौ यात्रुहरुबीच बाटोमै अलपत्र परका यात्रुहरुलाई गन्तब्यमा पुर्‍याउन राजमार्गहरुमा कडा सुरक्षा पहरा दिइने भएको हो । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र र जनपथ प्रहरीलाई सुरक्षामा कडाइ निर्देशन दिइसकेको छ ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन घिमिरेले गाडीहरुलाई स्कटिङ गरेर भएपनि यात्रुहरुलाई गन्तब्यमा पुर्‍याउन सरकारले विषेश सुरक्षाको ब्यावस्था मिलाएको जानकारी दिनुभएको छ ।
बाटामा नै आन्दोलनकारीहरुले पाला टागेर बसेकाले उनीहरुलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा गृहमन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा रहेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दीको चिमखोलामा गत पाँचदिनदेखि फैलिएको झाडापखालावाट २०० जनाभन्दा बढि विरामी परेका छन । चिमखोला गाविसका ९ वटै वडाका वासीन्दाहरु प्रभावित भएका छन् ।
झाडापखालावाट विरामी परेकाहरुमा अधिकांश वालवालिका रहेको बताईएको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेनीवाट एक दिनको पैदल यात्रापछि पुगिने सो गाउँका वासीन्दाहरु विरामी परेपछि गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा पर्याप्त औषधिअभाव हुनुका साथै पहिलो चरणको टोलिले नियन्त्रणमा लिन नसेकका कारण स्वास्थ्यकर्मी भरत पौडेलको नेत्रृत्वमा हिजो अर्कोटोलि त्यसतर्फगएको बताईएको छ ।
गत फागुन १९ गते एकै घरका ३ जनामा देखापरेको झाडापखालावाट हिजोसम्म पुरै गाविससम्म फैलिएको पुनले जानकारी गराउनु भयो । यता जिल्ला अस्पताल म्याग्दीले भने झाडापखाला लागेका विरामीहरुमध्ये करीव १ सयभन्दा बढिको उपचार भइसकेको र स्वास्थ्यकर्मी र औषधिसहितको टोली त्यसतर्फपर्ठाईसकिएको बताएको छ ।
सबिधान सभाको सुझाव सकंलनका लागी झापाको टागनडुब्बा पुगेको सभाषदको टोलीलाई मुस्लीम समुदायले अबरोध पुर्‍याएका छन ।
सभाषद केशवकुमार बुढाथोकीको नेतृत्वमा पुगेको सभाषदको टोलीलाई मुस्लीम नागरिकहरुले आफुहरुले आयानेजना गरेको कार्यक्रममा सभाषद उपस्थित नभएको बिरोधमा अबरोध पुर्‍याएका हुन ।
२सय ५० बढी सख्यामा रहेका मुस्लीमहरुले सबिधानमा आफ्नो अधिकार ग्यारेन्टी गर्न समेत सभाषदहरुलाई आग्रह गरेका छन । केही दिन अघि स्थानिय मदरसामा आयोजित मुस्लीम समुदायको कार्यक्रममा सभाषद अनुपस्थीत भएपछी उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन ।
एकिकृत माओवादीको जनसेनाका एक कमाण्डरले सरकारलाई नेपाली सेनाको भर्ति खुल्ला गरेर जनसेनाको भर्ति रोक भन्ने नैतिक आधार नरहेको बताएका छन ।
ज्ानसेनाको प्रथम डिभिजन मुख्यालयका उपकमाण्डर पावेलले नेपाली सेनाको भर्तिलाई सरकारले मान्यता दिएको कारण जनसेनाको भर्ति खुल्ला गर्ने आधार पाएको बताउनुभयो ।
जनसेना र नेपाली सेनाको दुरी निकै बढ्छ तर यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति नरहेको वहाँले बताउनुभयो । प्रथम डिभिजनले ३ दिन अघि शुरु गरेको भर्ना प्रकृयामा दैनिक ५० बढी युवाहरुले आवेदन दिएको र १ हजार नयँा लडाकुहरु भर्ना गरिने समेत वहाँले बताउनुभयो ।
हाल सम्म आवेदन दर्ता गराउने मध्ये १० प्रतिशत महिला रहेको उहाँको भनाई छ । १ सय ८० बढीले आवेदन फारम भरेको र अझै ७दिन सम्म जारी रहेने पावेलले जनकारी दिनुभयो ।
पर्ूव पश्चिम राजमार्गको बर्दिया भुरीगाउ सडक खण्डमा आज विहान प्रहरीको एक गाडी दर्ुघटना हुदा सात जना प्रहरी घाइते भएका छन् । वन्दका कारण अलपत्र परेका यात्रुहरुको उद्धार गर्नका लागि रोकिएका गाडीलाई स्कर्टिङ गरिरहेको प्रहरीको सो गाडी बबई बुढी खोलामा विहान सात ३० बजे दर्ुघटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।
दर्ुघटनामा परेका प्रहरीहरुलाई उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको छ ।
अन्तर्रर्ााट्रय महिला दिवसको अवसरमा दक्षिण एसियाला "महिलाहरुको ऐक्यवद्धता" नामक तिनदिने कार्यक्रम आज देखि राजधानीमा सुरु हुंंदै छ ।
राजधानीको त्रिपुरेश्वरमा तिनदिन सम्म चल्ने कार्यक्रममा साझेदारीको विकास, अन्तरक्षेत्रिय व्यापार मेला, नारी संसार-एकाकार, पदयात्रा, चित्रकला पर््रदर्शनी लगायतका कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएको छ
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको राष्ट्रिय अधिवेसन आज देखि राजधानीमा सुरु हुने भएको छ ।
अधिवेसनको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुहुने कार्यक्रम रहेकेा छ ।अधिवेसनमा देशभरबाट करिव दर्ुइसय जना प्रतिनिधीको सहभागिता रहने संघले जनाएको छ ।
प्रथम प्रधानमन्त्री कप अर्न्तराष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगितामा आज नेपाल निलो र थाईल्याण्डको जे डब्लू टिमबीच प्रतिष्पर्धा हुनेभएको छ ।
हिजो भएको खेलमा समुह बी अन्तर्रगर्त उपाधीको प्रवल दाबेदार मानिएको नेपाल रातो, बड्डलादेशको आरामबागसंग १-१ गोलको बराबरीमा रोकीएको थियो ।
विहिवार भएको उद्घाटन खेलमा नेपाल निलो, श्रीलंकाको राष्ट्रिय टिमसंग पराजित भएको थिया ।
दर्ुइ टिम सहभागि रहेकेा नेपाली टिमले एक खेलमा हार र एक खेलमा बराबरीमा चित्तबुझाएपछि घरेलु दर्शकहरुले नेपालको जितका लागि आजको खेल कर्ुर्नुपरेको छ ।
स्वर्गीय फोटो पत्रकार सुबोध सिंहको स्मृतीमा विरगन्जमा आज देखि क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनमा विरगन्ज्को आदर्शनगर रंगशालामा शुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन महासंघका केन्द्रय सदस्य महेश दास र स्वर्गीय फोटो पत्रकार सिंहका बुबा श्याम सिंहले संयूक्त रुपमा गर्नु भएको छ ।
उद्घाटन खेल अहिले बिजाम पर्ुनस्थापना केन्द्र र बैकर्ंस एशोसियसन बिच भइरहेको छ ।
टस जितेर एशोसियसनले अहिले व्याटिङ गरिरहेको छ । प्रतियोगितामा नेपाल पत्रकार महासंघ , विरगन्ज जेसिस , र्सर्ूय नेपाल प्रालि लगायत ६ वटा टीमको सहभागिता रहेको छ ।
उद्घाटन महासंघका केन्द्रय सदस्य महेश दास र स्वर्गीय फोटो पत्रकार सिंहका बुबा श्याम सिंहले संयूक्त रुपमा गर्नु भएको छ ।
राती १० बजेको सेरोफेरो जस्ताको त्यस्तै , फागुन २३
आज पनि बिहानैदेखि गाडी चलेका छैनन भने तराइका जिल्लामा बजार पसल र शैक्षिक संघ संस्था समेत ठप्प छ ।
सप्तरीको कन्चनपुरमा वन्दका विरुद्ध रिक्सावाल र ठेलावालले वन्द गरे ।
वन्दका नाममा ज्यादती वढ्दै जादा आफुहरुको मजदुरी धरापमा परेका भन्दै उनीहरु सडक अवरोध हुन ।
वन्द आव्हानकर्ताले सप्तरीको फतेपुरको वलुवा चौकमा स १ च्ा ४११ न्म्वरको मारुती भ्यान तोडफोड गरेका छन ।
हिजो तनावग्रस्त सिराहा आज शान्तिपर्ुण्ा रहे पनि त्याहा बजार पसल र शैक्षिक संघसंस्था ठप्प भए । बन्दका कारण सनसरीका बक्लौरी र एकम्वामा हुने संबिधान सुझाव सङकलन कार्यक्रम स्थगीत भयो । यस्तै बन्दले उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट लगायत प्रमुख बजारहरुमा खाद्यान्न तथा तरकारीको अभाव शुरु भएको छ । अभावका कारण बजारमा तरकारीको भाउ आकाशिएको छ ।
यसैविच सरकारले आन्दोलनरत थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट सङ्र्घष्ा समिति, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र नेपाल आदिबासी जनजाति महासङ्घलाई वार्ताको लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ ।
विभिन्न आन्दोरनरत पक्षसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता समितिले आज औपचारिक पत्र पठाएको जानकारी दिएको हो ।
अहिलेसम्म थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट सङ्र्घष्ा समितिले पत्र पाइसकेको समेत समितिले जनाएको छ ।
वार्ताको टेबुलबाटै समस्या समाधान गर्न पत्रमा आहृवान गरिएको छ । समितिका संयोजक तथा शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्ताकै माध्यमबाट तत्काल पूरा गर्न सकिने मागलाई तत्कालै सम्बोधन गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनमत संकलन गर्न गाउ गाउ गएका टोलीलाइ सहयोग गर्न सरकारी कर्मचारीलाइ निर्देशन दिनु भएको छ ।
उहाले परिवर्तित अवस्थाको जनतालाइ अनुभुती हुने गरि काम गर्न समेत कर्मचारीलाइ निर्देशन दिनु भएको छ ।
किरात थाक्थुङ चुम्लुङको महाअधिवेसनको उद्घाटन गर्न तेह्रथुमको म्याङलुङ पुग्नु भएका सभाध्यक्ष नेम्वाङले यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो ।
उहाले संविधानसभाको जनमत संकलन टोलीलाइ सहयोग गर्न नागरिक समाज राजनितिक दललाइ आग्रह गर्नु भएको छ ।
यसअघि बिहान धनकुटाका पत्रकारहरूसँग्ा कुरागर्दै दलगत स्वार्थलाई त्यागेर संविधान निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
उहाले संविधान निर्माण जस्तो काममा दलहरूले दलगत स्वार्थलाई लिन नहुने बताउनु भयो
सभाध्यक्ष नेम्वाङले जनमत सङ्कलन जस्तो काममा सभासद्हरुले तटस्थ बस्न्ुपर्ने बताउनु भयो ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले बन्दले सुझाव सङ्कलनमा अवरोध पुगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान निर्माण जस्तो महत्वपर्ूण्ा काममा अवरोध नपुर्याउन बन्द आहृवानकर्तालाई आहृवान गर्नुभयो ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले जस्तोसुकै अवरोधका बीच पनि समयमा नै संविधान बताउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै त्यस प्रति आशङ्का नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
कोसी बिस्थापीतहरुका लागि सरकारले खाद्यान्न किन्नकालागि प्रति परिवार महिनाको ५ हजार सात सय रुपैयाँ दिने निर्ण्र्ाागरेको छ ।
गहृ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले ५ जना सम्मको परिवारलाइ त्यति रुपैयाँ दिने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
कोसीले पर्ुर्वी तटबन्ध भत्काएपछि बिस्थाीपीत भइ बिभीन्न शिवीरमा बस्दै आएको सुनसरीका ५० हजार भन्दा बढि बाडी पिडीतहरुलाइ केही दिनमै पहिलो चरण अन्तरगत रकम बितरण गर्ने सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडीन्द्र पोखरेलले बताउनु भयो ।
उहाँले गृह मन्त्रालयले निर्ण्र्ाागरेकाले जिल्ला प्रसासन कार्यालय सुनसरीले रकम बितरण गर्ने बताउनु भयो ।
यस अघि कोसी पिडीतहरुलाइ बिश्व खाद्य सङ्गठनले खाद्यान्न सहयोग गर्दे आएकोमा तीन साता देखि खाद्यान्न रोकेको थियो ।
खादन्न सहयोग रोकीएपछि सरकारले पीडीतहरुका लागि खाद्यान्न किन्न रकम दिने निर्ण्र्ााभएको पोखरेलले बताउनु भयो । खाद्यान्न सहयोगका लागि सरकारले कोसी पिडीतहरुको राहात र उद्यारका लागि भनेर घोाषणा गरेको २ अर्वको राहात प्याकेजबाट सो रकम निकासी हुने छ ।
बिश्व खाद्य सङगठनले कोसी बिस्थापीतहरुलाइ यस अघि मासिक रुपमा प्रतिब्यक्ती १३ केजी चामल , २ केजी दाल र १ लिटर तेल बितरण गर्दे आएको थियो ।
कोसी पिडीतहरुलाइ मासीक रुपमा ८ सय रुपैयाँ प्रति परिवार समेत दिइदै आएको थियो । तीन सात देखि भने अकस्मात खाद्य सङगठनले खाद्यान्न सहयोग रोकेपछि शिवीरमा खाद्यान्न अभाव भएको थियो
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले वर्तमान सरकार ढाल्न प्रतिक्रान्तिहरु चौतफिर् सलबलाइरहेको बताउनुभएको छ ।
अनेरास्ववियू -क्रान्तिकारी) ले महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको शहीद सप्ताह समापन कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री पोखरलले वर्तमान सरकार ढाल्दा महिला, जनजाति, दलितलगायतका सबै समुदाय र वर्गको मुक्तिको आन्दोलनमा कुठराघात हुने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको सरकार ढल्नु भनेको जनआन्दोलनको सम्पर्ूण्ा उपलव्धी ढल्नु हो भन्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले सेना समायोजनको प्रसंगमा बोल्दै वृहत शान्ति संझौताको मान्यता विपरित काम गर्न नमिल्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दुवै खालका सेनालाई समायोजन गरेर राष्ट्रिय सेना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियू -क्रान्तिकारी)का केन्द्रिय अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले २०४६ सालपछि स्ववियू पथभ्रष्ट भएको बताउनुभयो ।
झापाको सुरुङ्गास्थित कनकाई क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । झडपमा चार जना घाइते भएका छन् ।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको कार्यक्रम नेविसंघले विथोल्न खोजेपछि डेढ घण्टा झडप भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले जनाएको छ ।
झडपमा नेपाली काङ्ग्रेस गाउँ इकाइ सभापति नेत्र चिमरिया, र तरुण दलका सन्तोष रायमाझी घाइते भएका छन् । क्रान्तिकारीतर्फप्रकाश आचार्य र कैलाश वराल घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । झडपका क्रममा प्रहरीले नेविसंघका राज कुँवर, क्रान्तिकारीका किरण भट्टर्राई र रत्न सुब्बालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकालाई छोड्न दवाव दिदै विद्यार्थीले प्रहरी चौकी सुरुङ्गा घेराउ गरेपछि साझ उनीहरुलाई छोडिदिएको प्रहरी नायव निरीक्षक बिष्णु खड्काले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा माओवादी सभासद गौरीशंकर खड्का, वाईसीएलका केन्द्रीय सदस्य अग्निलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।
बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्री गणेस साहाले कोसी सम्भौतामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ
सम्झौता पुनरावलोकन नभए सम्म कोसीले पटक पटक बिपत्ती ल्याउने भन्दै यसकालागी सरकारले पहल थाल्ने बताउनु भयो ।
सुनसरीको इनरुवामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दे मन्त्रि साहाले सम्झौताले गर्दा नेपालले तटबन्ध मर्मतको काम समेत गर्न नसकिएकाले कोसीले तटबन्ध भत्काएको बताउनु भयो ।
मन्त्रि साहले कोसी सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको भन्दै यसले समस्या पारिरहने बताउनुभयो ।
दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भैरहेको बेला बन्द भएको मोरङ वाँसवारी स्थित बिद्युत प्राधिकरणको मल्टिफ्युलले दैनिक १८ मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्न थालेको छ ।
प्लान्ट संचालन गर्न आवश्यक पर्ने फर्नेस आयल अभाव हुँदा दश दिन मल्टीफ्युल बन्द भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमबाट सिमित इन्धन प्राप्त हुने गरेको कारण पटक पटक बन्द भएको मल्टि फ्युल अब भने नियमित संचालन हुने बताइएको छ ।
निगमले विगतमा एक पटकमा १ सय किलो लिटर इन्धन उपलव्ध गराउने गरेकोमा अहिले भने ३ सय किलो लिटर फर्नेस आयल उपलव्ध गराउने तयारी थालेको छ । चालु अवस्थामा रहेको जेनेरेटरका लागि अहिले दैनिक ४० किलो लिटर इन्धन आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मल्टिफ्युलमा रहेको ६ वटा जेनेरेटर मध्ये तीन वटा व्रि्रेका छन् । व्रि्रेको चार नम्बर जेनेरेटर भने मर्मत पछि संचालनमा आएको छ ।े ।
प्रारम्भीक जानकारी अनुसार बन्द रहेको मल्टिफ्युल पर्ुण्ा क्षमतामा संचालन गर्न ३० करोड खर्च लाग्ने छ भने त्यसका लागि करिव ५ महिना समय लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भद्रपुर विमानस्थलको स्तरबृद्धि र पुनर्निर्माणका लागि भोलिदेखि झापा-काठमाडौ हवाइ उडान बन्द हुने भएको छ ।
आगामी एक महिनासम्मका लागि उडान बन्द गरिन लागेको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण कार्यालय भद्रपुरले जनाएको छ ।
विमानस्थलको धावन मार्ग, ट्याक्सी वे र एप्रोन सुधारका लागि काम थालिएकाले हवाइसेवा बन्द गर्नु परेको विमानस्थल कार्यालयका इञ्जिनियर मणि गोविन्द श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले प्राधिकरणको निजी स्रोतबाट विमानस्थलको पुनर्निर्माण गरिन लागेको जानकारी दिनु भयो । प्राधिकरण कार्यालय स्रोतका अनुसार आठ करोड ९१ लाखको लागतमा विमानस्थलको पुनर्निर्माण गरिन लागेको हो ।
प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले आगामी चैत २४ सम्म उडान बन्द गरिएको सूचनामार्फ जनाएको छ । झापामा बुद्ध र यति एयरलाइन्सले दैनिक छ वटा उडान भर्दै आएका थिए ।
सप्तरीको गमरीया पर्वाह गाविसका रामेश्वर मण्डलको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ ।
घरमा टेलीभिजनको तार जोडिरहेको अवस्थामा तार पड्किएर करेन्ट लागेर मण्डलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विराटनगरका उद्योगी व्यवासायीले नियमित विद्युत आपर्ूर्तिको माग गर्दै आज विराटनगर भन्सार कार्यालय घेराउ गरेका छन् । आन्दोलनका दोस्रो चरणको कार्यक्रम अर्न्तर्गत उद्योगी, व्यवसायीले आज भन्सार कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।
विद्युत नियमित आपर्ूर्ति हुनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायतका माग राखी उद्योग संगठन मोरङको अगुवाईमा विराटनगरमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
दिउसो २ बजेको सेरोफेरो फागुन २२
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय एकता, र्सार्वभौमिकता र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
अब बन्ने संविधानमा जनताले आफ्नो संविधान हो भन्ने प्रत्याभुति दिनर्ुपर्ने बताउनु भयो ।
कानुन व्यवसायीहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको सरहाना गर्दै राष्ट्रपति यादवले अव पनि त्यस्तै भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनको राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उहाले यस्तो बताउनु भएको हो ।
'लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, नेपाल बार एसोसियनको अभियान' भन्ने नाराका साथ सम्मेलन आजबाट सुरु भएको हो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिन सक्ने बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्षको नाताले भने कुनैपनि सेनाललाई निर्देशन दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।
सेना समायोजन विषेश समितिको बैठक छिटै बस्ने र त्यसले दुवै सेनामा देखिएको विवादको विषयमा छलफल हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउनु र जनताले चाहे बमोजिम संविधान लेख्नु अहिलेको अवश्यकता भएको बताउनु भयो । के आधारमा सङ्घीयतामा जाने, शक्ति कसरी बाँडफाँड गर्ने, राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस चलाउनर्ुपर्ने बेलामा अनावश्यक विषयमा केही दलहरूले बखेडा झिकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ ।
स्वतन्त्रला, समानता र लोकतन्त्रको लागि आफूहरू लागिपर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सेनामा भर्ती खोलेर एकीकृत नेकपा माओवादीले गल्ति गरेको बताउनु भयो ।
तीन दिन सम्म मात्र भनिएको थारुवानको वन्द अनिश्चित भन्दै आजदेखि लम्विएपछि पर्ुवका जनजीवन कष्टकर वनेको छ । सिरहाको लहानमा दिउसो १२ बजेदेखि अनिश्चितकालकालागि भन्दै कफयू लगाईएको छ ।
बन्दकर्ता र प्रहरी बिच झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कफयू लगाईएको हो ।
अहिलेपनि बन्दकर्ताहरुले कफयू उल्लँघन गरेका छन । प्रहरीले त्यहाँ केही राउण्ड अश्रुग्याँस्ा र लाठी प्रहार गरेको छ । लाठीप्रहारवाट छ जना र्घाईते भएका छन ।
यसैविच सुनसरीको पकलीमा वन्द आव्हानकर्ता र प्रहरीवीच झडप भएको छ । झडपमा २ जना वालक सहित तीन जना घाइते भएका छन ।
थारुवानको वन्दले सविधान निर्माणका लागि गाउ आएका सभासदहरुको सुझाव सकलन गर्ने कार्य समेत प्रभावित वनेको छ ।
बन्दका कारण मोरगका निजी विद्यालयमा आजदेखि सुरु गर्ने भनिएको कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा स्थगित भएको छ । सरकारी विद्यालयमा सञ्चालित परीक्षा पनि प्रभावित भएको छ । लगातारको बन्दले तर्राईको जनजीव्ान कष्टकर बन्दै गईरहेको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभाले सरकारले थारू जातीलाई मधेसीमा सूचिकृत गरिएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो । सरकारले भने थारू जातीलाई मधेसिमा सूचिकृत नगरिएको हिजो नै स्पष्ट पारिसकेको छ । यसै गरी पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको बन्दका कारण आज तेस्रो दिन पनि मेची र कोसीको यातायात ठप्प भएको छ ।
बन्दका कारण मेची राजमार्गमा चल्ने सवारी तीन दिनदेखि चल्न नसकेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । आफूहरूको अनुमति बिना सभासद्हरू संविधानको सुझाव सङ्कलन गर्न लिम्बुवान प्रान्तमा पसेको भन्दै मञ्चले आजसम्मका लागि लिम्बुवान राज्य बन्दको आहृवान गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले बन्द हड्ताल गर्नेलाई जेलसम्म हाल्ने गरी कडाइ गरिने बताउनु भएको छ ।
हिजो साझदेखि विराटनगरमा रहनुभएका अर्थमन्त्री भट्टर्राईले उद्योगीस"गको भेटमा बन्द, हड्ताल गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने बताउनु भएको हो ।
आज मोरङ व्यापार संघले विराटनगरमा गरेको छलफलमा सरकारले औद्योगिक क्ष्ँेत्रमा शान्ति सुरक्षाको सुधार गर्ने बताउनु भयो ।
उद्योगी व्यवसायीले साथ दिएमा कडा कानुन ल्याएर बन्द, हड्ताल रोक्ने भट्टर्राईले दावी गर्नुभयो । र्
अर्थसचिव समेतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले लगानीको वातावरण नभएको विद्युत नभएको र शान्ति सुरक्षा खस्किएको गुनासो गरेका थिए । र्
अर्थ मन्त्री भट्टर्राईले यस वर्षो बजेट जेठ १५ भित्र नै ल्याएर काम गर्न सजिलो बनाउने जानकारी समेत बताउनु भयो ।
बजेट छिटो आए उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ त्यसैले हामी छिटो बजेट ल्याउने तयारीमा छौं - उहा"ले भन्नुभयो ।
विद्युत आपर्ूर्तिका लागि भारत सरकारकास"ग कुरागरी थप विद्युत माग्ने पनि उहा"ले बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री भट्टर्राईले पर्ूवाञ्चलका उद्योगीलाई राहत दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
रक्षामन्त्री रामबहादुर थापालेे सङ्क्रमणकालको फाइदा प्रतिगामी तत्वहरूले उठाउन सक्नेतर्फसचेत रहन विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
सङ्क्रमणकालमा विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले बाहृय हस्तक्षेप रोक्नको लागि तयार रहन पनि विद्यार्थी सङ्गठनलाई आग्रह गर्नु भयो । भरतपुरको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो ।
जनमुखी शिक्षा अहिलेको आवश्यक रहेको बताउँदै रक्षामन्त्री थापाले वर्तमान शिक्षा नीति नै अशान्तिको प्रमुख कारण भएको जिकिर गर्नु भयो. े ।
स्ववियु निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै अखिल क्रन्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै रक्षामन्त्री थापाले शिक्षा क्षेत्रमा दलालहरूले आधिपत्य जमाइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
सङ्क्रमणकालमा विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले बाहृय हस्तक्षेप रोक्नको लागि तयार रहन पनि विद्यार्थी सङ्गठनलाई आग्रह गर्नु भयो
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका देशकै ठुलो उदयपुर सिमेण्ट उद्योगले अप्रत्यासित रुपमा गैंडाछाप सिमेण्टको मुल्य बृद्धि गरेको छ ।
उद्योगले आजदेखि लागु हुनेगरी प्रतिबोरा अधिकृत बिक्रेता मुल्यमा ३० रुपैंया बृद्धि गरी ४ सय ८० रुपैंया पुर्‍याएको छ ।
बिभिन्न आयोजनाहरुका लागि प्रतिबोरा मुल्यमा ३३ रुपैंया बृद्धि गरी ४ सय ९० रुपैंया कायम गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक उद्धव बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि अधिकृत बिक्रेता मुल्य ४ सय ५१ रुपैंया र आयोजनाहरुका लागि ४ सय ५७ रुपैंया मुल्य कायम रहेको थियो । उद्योगको हिजो काठमाण्डौंमा सम्पन्न संचालक समितिको बैठकले मुल्य बृद्धि गर्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
सरकारले हिजो. र्सार्वजनिक गरेको यातायातको नयाँ वैज्ञानिक भाडादर आज देखि लागु भएको छ ।
र्सार्वजनिक गरिएको भाडादर अनुसार तर्राईको रूटमा लामो दूरीमा प्रतिकिलोमिटर १ रुपैयाँ १८ पैसा कायम गरिएको छ भने मध्यम दूरीमा २ सय ५० किलोटिमरसम्म १ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ ।
नयाँ भाडा दर अनुसार शहरी क्षेत्रमा ३ किलोमिटर सम्मको ९ रुपैयाँ, ४ किलो मिटरसम्म १० रुपैयाँ, ७ किलोमिटरसम्म ११ रुपैयाँ, ९ कोलोमिटरसम्म १२ रुपैया तय गरिएको छ ।
यस्तै १२ किलोमिटरसम्म १३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्म १६ रुपैया र २५ किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ ।
आफूहरूले सिफारिस गरेका विद्यालयहरूलाई मात्र भवन निर्माण गरिदिन अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले इलामका जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई दवाब दिएका छन् ।
विद्यालय भौतिक निर्माण तथा सुधार योजनाअर्न्तर्गत जिल्लाका ४० विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने बारे यसअघि भइसकेको निर्ण्र्ाामेत खारेज गर्न कार्यकर्ताले जिशिअ हरि गौतमलाई दवाव दिएको बताइएको छ ।
प्रति भवन ५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा निर्माण हुने ती भवनहरू अन्तर्रर्ााट्रय मान्यताअनुसारका भएका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्ण्र्ााबमोजिम रहेकाले भवन निर्माणको पर्ूव निर्ण्र्ााा पुनर्विचार गर्न नसकिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
एक विद्यार्थी बराबर शुन्य दशमलव ७५ वर्गमिटरका दरले निर्माण हुने ती भवनहरू ५० जना विद्यार्थी क्षमताका रहने बताइएको छ ।
कार्यालयका अनुसार त्यस योजनाअर्न्तर्गत इलाममा हालसम्म ४० वटा भवन वितरण भइसकेको छ भने बाँकी १५ वटा भवन वितरणका क्रममा रहेका छन् ।
बिहान ८ बजे , फागुन २१
आज पनि बन्द यथावत छदैछ
थारुवान र पल्लो किरात लिम्बुवानको बन्दका कारण आजपनि पूर्वमा गाडी चलेका छैनन ।
बन्दका क्रममा गएराती साढे एकबजे थारुवान कार्यकर्ताले सुनसरीको झुम्कामा दर्ुइवटा सवारी साधनमा तोडफोड गरेका छन ।
पर्ूवआउदै गरेको को १ ख २२८९नँम्वरको टक र को १ त ३४९४ नम्वरको जीप तोडफोड गरेका हुन ।
हिजै सुनसरीको पकलीमा गाडी, टिपर, मारुती र मोटरर्साईकल गरि पाँचवटा सवारीका साधन तोडफोड गरिदिएका छन ।
सुनसरीको दुहवीमा लागेको हटिया बन्द गराउन खोज्ने वन्दकर्ता र ब्यापारीबिच हिजो झडप भयो । झडपमा परि पाँच्ाजना घाइते भएका छन् । पर््रदर्शनकारीले जनकल्याण स्वास्थ्य उपचार केन्द्र दुहवीमा समेत तोडफोड गरेका छन ।
झडप पछि दुहवी साझ तनावग्रस्त बन्यो र्।र् इलाका प्रहरी कार्यालयमा हिजो साझ भएको छलफलमा आन्दोलन शान्तिपर्ुण्ा गर्ने सहमती भएको छ ।
उता बिराटनगरमा भएको झडपमा ६ जना व्यवसायीहरु र एक जना पर््रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । आंशिक रुपमा खुल्ला रहेको बिराटनगरका पसलहरु जर्वजस्ती बन्द गराउन खोज्ने थारुहट कार्यकर्तालाई रोक्न खोज्दा झडप भएको प्रहरीले बताएको छ ।
व्यवसायी र बन्दकर्ता बीच बिराटनगरको गुद्री बजारमा झडप भएको हो झडपपछि बिराटनगरबजार केही बेर तनावग्रस्त बन्यो ।
बन्दका बेला मोटरसाइकल कुदाएको भन्दै सुनसरीको दुहवीमा ना ३प ६४३५ र को ३ प १३२३ नम्वरको मोटरसाइकलमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै बिराटनगर बरगाछी चौकमा मे २ प ७११ नम्वरको मोटरर्साईकल बन्द कर्ताहरुले तोडफोड गरिदिएका छन । त्यसैगरि सप्तरीको माहुलीमा बन्दकर्ताले ना २ ख ६१४३ नम्बरको यात्रुवस तोडफोड गरेका छन ।
यस्तै बन्दका कारण आज पनि सुनसरी मोरङग औद्योगीक कोरीडोर क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द भए । बन्दका कारण सिराहा सप्तरी र उदयपुरको जनजिवन पनि प्रभावित भएको छ ।
यस्तै नयाँ संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न सभासदहरु आएको विरोधमा पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले मेचीकोशीका पहाडी क्षेत्रमा यातायात बन्द गराएको छ ।
अरुण पर्ूवका नौ जिल्लाको क्षेत्रलाई स्वतन्त्र लिम्बुवान राष्ट्रको दाबी गर्दै आएको मञ्चले नेपालका सभासदहरु गैरकानुनी ढंगले लिम्बुवान छिरेको भन्दै गाडी बन्द गराएका हुन् ।
मञ्चले अरुण पर्ूवका नौ जिल्लाका सभासदहरुलाई राजिनामा गर्न समेत माग गर्दै आएको थियो ।
पाँचथरमा दुइजनाको गयो ज्यान
पाचथरमा गएराती भएको सडक दुर्घटनामा दुइजनाको मृत्यु भएको छ । अरु ११ जना घाइते भएका छन ।
ताप्लेजुङबाट अलैची लिएर झापाकालागी हिडेको ना २ ख ३३१६ नम्करको ट्रक पाँचथरको भालुचौकमा दर्ुघटना भएको हो ।
दर्ुघटनामा ताप्लेजुङको फुङलिङकी २९ बषिर्या भिमा मिश्रको मृत्यु भएको हो । मृत्युभएका अर्का पुरुषको भने नाम ठेगाना खुलेको छैन ।
दर्ुघटनामा घाइतेभएका ८ जनाको जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा उपचार भैरहेको छ । अरु तिन जना घाइतेलाइ पनि अस्पताल ल्याइदै गरेको हाम्रा पाचथर सहकर्मी गणेश साम्पाङले जनाएका छन ।